လာရောကျလညျပတျ အားပေးသူအပေါငျးကို ကြေးဇူးတငျလကျြ 😁
ပွနျတှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျ။ အားလုံး ကနျြးမာပြျောရှငျကွပါရဲ့လား။
ယမာတဈယောကျ လှနျခဲ့တဲ့ ၉ နှဈလောကျကစပွီး Kpop လောကထဲ ဝငျပွီးနောကျ Blog ကနေ ပြောကျခကျြသား ကောငျးသှားခဲ့တယျ။ 2013 လောကျမှ စာပွနျစရေးဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ blog ပျေါတော့ ပွနျရောကျမလာ ဖွဈခဲ့ဘူး။ ပွောရရငျ အဲ့ကမှစပွီး ဝတ်ထုတှကေို ကိုယျရေးတတျသလောကျ အတညျတကြ ရေးဖွဈခဲ့တာပေါ့။
ရေးဖို့ motivation ကလညျး Kpop ကပဲ ရခဲ့တာ။ ဘာလို့ဆို ကိုယျရေးတာ Kpop Fanfic တှလေေ။ တဈပိုငျးရေးတယျ၊ တငျတယျ၊ အားပေးမှုတှေ ရလာတယျ၊ ပြျောရတယျ၊ ဆကျရေးဖို့ ခှနျအားတှေ ဖွဈလာတယျ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နှဈနှဈလောကျ အကွာမှာ စာမကျြနှာ ၂၇၀ လောကျ ရှိတဲ့ ဇာတျလမျးရှညျတဈပုဒျကို အပွီး ရေးနိုငျခဲ့တယျ။
အဲ့နောကျပိုငျး ဆကျတိုကျရေးလာလိုကျတာ Kpop Fanfic တှေ တဈပုဒျပွီး တဈပုဒျပေါ့။ တပိုငျးတစနဲ့ ဆကျမရေးတတျတော့ပဲ ရပျထားခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှေ ရှိခဲ့သလို အပွီးထိ ရေးနိုငျခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတို၊ ဇာတျလမျးရှညျ တှဟောလညျး ၁၀ ပုဒျလောကျ ရှိခဲ့တယျ။
ဒါတှဟော ဒီ ၆ နှဈတာမှာ Blog ပျေါ ရောကျမလာခဲ့သျောလညျး ယမာတဈယောကျ စာရေးခွငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး အလုပျရှုပျနခေဲ့ရခွငျး အကွောငျးပေါ့။
အခု ယမာ့ အတှေးထဲမှာ Plan နှဈခု ရှိနတေယျ။
တဈခုက ကိုယျရေးထားခဲ့တဲ့ Fanfic တှကေို Kpop နဲ့ မရငျးနှီးတဲ့ သူတှပေါ ဖတျလို့ ရအောငျ ပွနျပွောငျးရေးသား ကွညျ့ခငျြတယျ။ ဘာလို့ဆို ယမာ့ သူငယျခငျြးတခြို့ကပွောတယျ။ နငျရေးတာတှေ ငါတို့ ဖတျခငျြပမေယျ့လညျး ကိုရီးယား နာမညျတှေ တှလေို့ကျတာနဲ့တငျ ခေါငျးရှုပျပွီး မဖတျနိုငျတော့ဘူးတဲ့လေ။ အဲ့တော့ ယမာက Kpop idol တှလေညျး ပြောကျသှားစရာမလိုပဲ Kpop နဲ့ မရငျးနှီးတဲ့ လူတှလေညျး ဖတျလို့ရအောငျ ပွနျရေးကွညျ့မယျ။
နောကျတဈခုက အသဈအသဈတှေ ရေးမယျ။ Kpop Fanfic တှပေဲ ရေးနခေဲ့တော့ ကိုယျ့ကိုယျကို မေးခှနျးတဈခု မေးမိတယျ။ ငါလေးဟာ Kpop idol တှမေပါတဲ့ ရိုးရိုး ပုံမှနျ ဝတ်ထုတှရေော ရေးတတျသေးရဲ့လားလို့။ ကွိုးစားကွညျ့မှ သိမယျလေ။ ဟုတျတယျမလား။
ယမာ စိတျကူးတှေ ဆကျယဉျမယျ။ အိမျမကျအဟောငျးတှကေို အသကျပွနျသှငျးမယျ။ နောကျထပျ အိမျမကျ အသဈအသဈတှေ ဆကျမကျမယျ။ ယမာ့ရဲ့ အိမျမကျတှနေဲ့ စိတျကူးတှကေို စာသားတှအေနနေဲ့ ခရြေး အကောငျအထညျဖျောသှားမယျ။
ယမာနဲ့ အတူ နအေိ့မျမကျအဟောငျးလေးတှကေိုရော၊ နအေိ့မျမကျသဈလေးတှကေိုရော အတူခံစား ဖတျရှုပေးကွပါဦးလို့ တောငျးဆိုပါရစေ။
9:40PM (GMT+8 Time)
Posted by Yaminnie’s Daydream at 7:02 AM No comments: Links to this post
အောကျပါအခကျြလေးတှဟော သူငယျခငျြးတို့ သိပွီးသားလေးတှေ ဖွဈနိုငျသလို မသိသေးတာလေးတှလေညျး ဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ အခြိနျယူပွီး ဖတျကွညျ့လိုကျကွပါနျော… J
၁) အဆီနညျးတဲ့ အစာ စားပါ
အမြှငျဓာတျမြားမြားပါဝငျတဲ့ အသီးအရှကျတို့ကို ပုံမှနျစားသုံးပေးပါ… (ဥပမာ ပနျးသီး, စတျောဘယျရီ, အစိမျးရောငျ ဇီးသီး, ပဲသီး, မုနျလာဥနီ, ပနျးဂျေါဖီ, အစရှိသညျဖွငျ့)… အသားမှာဆိုရငျလညျး အဆီမြားတဲ့ အသားတှကေို ရှောငျပွီး အဆီနညျးကာ အသားဓာတျ အမြားဆုံးရသော အစိတျအပိုငျးဖွဈတဲ့ ကွကျရငျပုံသားမြိုးကို စားသုံးပေးပါ… ဆနျမှာဆိုရငျလညျး brown rice လိုဆနျမြိုးကို စားသုံးလြှငျ အားလဲရှိပွီး အဆီလဲမတကျစပေါဘူး… အဓိက ရှောငျရနျတှကေတော့ ဆီကွျောလို မုနျ့ပဲသရစောမြား, fast food နဲ့ အရောငျရငျ့သော အသားမြား (ဥပမာ ဘဲသား, အမညျးသား, သိုးသား စသဖွငျ့)…
ရမြေားမြားသောကျလေ ဗိုကျက အဆီတှကေလြပေါပဲ… ရကေို တဈနတေ့ဈနေ့ လုံလောကျစှာ မသောကျဘူးဆိုရငျ ခန်ဒာကိုယျက အဆီတှကေို ခဖြေကျြရာမှာ အရေးပါတဲ့ အသညျးဟာ အလုပျလုပျတာ နှေးလာပါတယျ… နှေးလာတာနဲ့ အမြှ အဆီတှကေို မွနျမွနျ မခဖြေကျြပေးနိုငျတော့ပဲ ဗိုကျထဲမှာသာ အဆီတှေ စုပုံလာပွီး ဗိုကျခေါကျကွီးထူလာတတျပါတယျ… ဒီတော့ အသညျးဟာ ဗိုကျထဲက အဆီတှကေို မွနျဆနျကောငျးမှနျစှာ ခဖြေကျြပေးနိုငျဖို့အတှကျ ရမြေားမြားသာ သောကျသုံးပေးပါ… ဖွဈနိုငျရငျ တဈနကေို့ရေ တဈဂါလံလောကျ သောကျပေးပါ… ရခေညျြးပဲ မသောကျခငျြဘူးဆိုရငျ သဘာဝ သဈသီးဖြျောရညျလေးတှနေဲ့ တှဲပွီး သောကျပေးနိုငျပါတယျ…
လကေ့ငျြ့ခနျး သီးသနျ့သှားလုပျနဖေို့ အခြိနျမရှိဘူးဆိုရငျတောငျမှ လမျးကို ပုံမှနျလြှောကျပေးပါ… အိမျကနေ ကြောငျးကို သှားတာ နီးနီးလေးဆိုရငျ စကျဘီးတှေ ဘတျဈကားတှေ စီးမနပေါနဲ့ အိပျရာက နညျးနညျးစောစောထ အခြိနျလေး နညျးနညျးယူပွီး လမျးလြှောကျသှားလိုကျပါ… အိမျကနေ အလုပျကို ဝေးတယျ ဘတျဈကားတျောတျောစီးပွီး သှားရတာဆိုရငျလညျး အလုပျက မှတျတိုငျမရောကျခငျ တဈဂိတျ နှဈဂိတျလောကျ ကွိုဆငျးပွီး လမျးလြှောကျသှားလိုကျရငျ အဆငျပွပေါတယျ… မနကျခငျးမှာ လမျးလြှောကျတာဟာ ဗိုကျထဲက အဆီတှကေို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ကစြသေလို တဈနတေ့ာလုံးအတှကျလညျး လနျးဆနျးတကျကွှ နစေပေါတယျ…
တဈနကေို့ အိပျထမတငျ အကွိမျ ၃၀ ခနျ့, ထိုငျထ အကွိမျ ၄၀ခနျ့, ပလကျအနအေထားဖွငျ့ ခွထေောကျစုံမွှောကျတငျမှုကို အကွိမျ ၃၀ခနျ့ လောကျ ပုံမှနျလုပျပေးသှားရငျ အဆီတှကေပြွီး ဗိုကျခပျြလာမှာ အမှနျပါပဲ… ထို့အပွငျ တဈပတျကို ၂ခါလောကျ ပုံမှနျ စနဈတကြ ရကေူးပေးခွငျးဟာလညျး သိသာစှာ ဗိုကျခပျြလာစတေဲ့ နညျးဖွဈပါတယျ…
၅) ညစာမစားခွငျးကို ရှောငျပါ
ဗိုကျခပျြခငျြသော ပိနျခငျြသောသူ တျောတျောမြားမြား လုပျလရှေိ့တာကတော့ ညစာရှောငျခွငျးပဲဖွဈပါတယျ… ဒါပမေယျ့ ထို အယူအဆဟာ မှားယှငျးတဲ့ အယူလို့ ဆရာဝနျမြားကပွောကွပါတယျ… ညစာမစားလို့ ဗိုကျက အဆီတှကေလြာမှာ မဟုတျတဲ့အပွငျ ဗိုကျထဲမှာ အစားအစာမရှိတဲ့အတှကျ အဆီခဖြေကျြနှုနျးကလညျး ကဆြငျးလာမှာ ဖွဈပါတယျ… ဒါ့ကွောငျ့ မနကျစာလညျး မရှောငျပါနဲ့ နလေ့ညျစာလညျး မရှောငျပါနဲ့ ညစာကိုလညျး မရှောငျကွပါနဲ့… စားမှာသာစား… သငျ့တျောတာတဲ့ အစားအစာတှကေို ပုံမှနျစားကွဖို့ လိုအပျပါတယျ…
အရကျတို့ ဘီယာတို့ကို တတျနိုငျသလောကျ ရှောငျဖို့ပါပဲ… ဗိုကျခပျြခငျြတယျဆိုရငျတော့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ လြှော့လြှော့သောကျကွညျ့ပါ…
နိဂုံးခြုပျနနေဲ့ ပွောခငျြတာကတော့ မှနျကနျတဲ့ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျ အရာမြားနဲ့ မှနျကနျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတို့ကို စိတျအားထကျသနျစှာ ပုံမှနျ ကွိုးစားလုပျဆောငျ သှားကွမယျဆိုရငျတော့ ပူနတေဲ့ ဗိုကျကလေးတှကေို အလငျြအမွနျ ခပျြသှားစမှော ဖွဈပါတယျ…
ရေးသူ = ယမမငျးလေး (ဘာသာပွနျ)
Posted by Yaminnie’s Daydream at 5:39 AM 1 comment: Links to this post
Labels: Archives (Info Sharing)
မင်းက ငါ့ကို ခေါ်လေပြီ…
မှတ်ချက် ။ ။ ယောက်ျားလေး ရှုထောင့်မှ ရေးသားသည်...
Posted by Yaminnie’s Daydream at 7:23 PM No comments: Links to this post
Labels: ယမာရေးတဲ့ ကဗျာလေးတွေ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလှဆုံး ပန်းခြံများ (၁)
Scotland မှာရှိတဲ့ “The Garden of Cosmic Speculation”
တစ်နှစ်နေမှ တစ်ခါသာ ပြည်သူလူထု ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ တရားဝင်ဖွင့်ပေးတာပါ… သင်္ချာနဲ့ သိပံနည်းပညာကို ဖော်ပြထားတဲ့ ပန်းခြံတစ်ခုပေါ့… ဒီပန်းခြံလိုပန်းခြံမျိုး ကမ္ဘာမှာ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်… စတင်တည်ထောင်သူကတော့ Charles Jencks နဲ့ သူ့ရဲ့  ဆုံးသွားသော ဇနီးသည် Maggie Keswick တို့ပါပဲ… သူများတွေ ပန်းခြံဆောက်ရာမှာ မတွေးမိတဲ့ အတွေး၊အကြံဥာဏ်တွေနဲ့ အခြေတည်ပြီး ဆောက်ထားတဲ့ ဒီပန်းခြံကို 1989 ခုနှစ်မှာ စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ…
2) Neatherlands မှာရှိတဲ့ “Keukenhof Gardens”
အမျိုးပေါင်းစုံလှတဲ့ ပန်းတွေကို အနှပညာ ဆန်ဆန် ပြသထားရာမှာ ပြိုင်ဖက်မရှိတဲ့ ဥယျာဉ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ကမ္ဘာကျော် ဒီဥယျာဉ်ဟာ နယ်သာလန်ရောက်သူတိုင်း သွားသင့်သော နာမည်ကျော် နေရာတစ်ခုပါပဲ… ဒီဥယျာဉ်ဟာ ဂမုန်းပန်း အမျိုးပေါင်း ၇သန်းခန့် တည်ရှိရာ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…
3) Thailand မှာရှိတဲ့ “Suan Nong Nooch Garden”
ထိုင်းမှာရှိတဲ့ ပတ္တယားမြို့ မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ထူးဆန်း၍ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှိသော ရှုခင်းတွေကြောင့် ခရီးသွားတွေရဲ့  အာရုံကို ဆွဲဆောင်ရာ ဖြစ်တယ်… ထိုင်းရိုးရာ ပုံစံ အိမ်လေးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်/စားသောက်ဆောင်ကြီးတွေ နဲ့ ရေကူးကန်တွေ ရှိတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်တယ်… ၆၀၀ ဧက ကျယ်ပြန့်သော မြေကို 1954 ခုနှစ် တုန်းက Mr. Pisit နဲ့ Mrs. Nongnooch တို့က ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်… အစပိုင်းက ဒီမြေပေါ်မှာ သစ်သီးသစ်ပင်တွေ စိုက်ပျိုးဖို့ လျာထားခဲ့တာပါ… နောက်ပိုင်းမှ Mrs. Nongnooch က အပူပိုင်းဒေသ ဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ် သစ်ပင်တွေနဲ့ ပန်းတွေကို အလှဆင်ပြသဖို့ ခိုင်မာစွာဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ…
ထိုအစီအစဉ်အတိုင်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး 1980 မှာ ပြည်သူလူထုအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်… “suan” ဆိုတာကတော့ ထိုင်းလို ဥယျာဉ်ကို ခေါ်တာပါ… ထို ဥယျာဉ်မှာ ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုကပွဲ/ပြပွဲတွေနဲ့ စည်ကားတဲ့အတွက် နှစ်စဉ် လည်ပတ်သူ ၂၀၀၀ နှင့် အထက် ရှိနေဆဲပါ…
Posted by Yaminnie’s Daydream at 9:47 PM No comments: Links to this post
လက်ဖက်ခြောက်အိတ်တို့၏ အသုံးဝင်ပုံများ(အဆက်ရဲ့  အဆက်)
အသုံးပြုပြီးသား လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကို စိမ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းထဲကို ဖုန်သုတ်တဲ့အ၀တ်စလေးနှစ်လိုက်ပြီး အဲ့ဒီအ၀တ်နဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ ပရိဘောဂတွေရဲ့  မျက်နှာပြင်ကို တိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် ပေါ်လှစ်ရှ် တင်စရာမလိုပဲ တောက်ပြောင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်… တိုက်ပြီးရင်တော့ အ၀တ် အခြောက်နဲ့ ခြောက်သွေ့သွားအောင် ပြန်သုတ်လိုက်ပေါ့နော်….
2) ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အနံ့တွေနံနေရင် ဒါမှမဟုတ် ဆေးလိပ်ပြာခံတဲ့ ခွက်ထဲမှာ အနံ့တွေ အရမ်းမွှန်နေရင် အသုံးပြုပြီးသား လက်ဖက်ခြောက်အိတ်လေးတွေ ထည့်ထားလိုက်ပါ… မကောင်းတဲ့ အနံ့တွေကို စုပ်ယူသွားပါလိမ့်မယ်…
3) အက်စစ်(Acid) ကြိုက်တဲ့ အပင်တွေဖြစ်တဲ့ ဇီဇ၀ါပန်းပင်တို့၊ စားလို့ရတဲ့ အသီးချဉ်ချဉ်တွေ သီးတဲ့အပင်တို့ (လိမ္မော်၊ သံပရာ၊ ရှောက်) နဲ့ Fern ပင် (ဒရင်ကောက်ပင်)တို့ ကြီးထွားမှုမြန်ဆန်ကောင်းမွန်စေချင်ရင် လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ရောထားတဲ့ ရေကို တခါတရံ မြေထဲကိုတိုက်ရိုက်(အပင်ပေါ်မှတစ်ဆင့်မဟုတ်ပါ) လောင်းလောင်းပေးပါ… ကောင်းမွန်တဲ့ မြေသြဇာအတွက် နိုက်ထရိုဂျင် ပမာဏများလာအောင် အသုံးပြုပြီးသား လက်ဖက်ခြောက်အိတ်လေးတွေထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်လေးတွေကိုလည်း မြေသြဇာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…
4) ညစ်ပတ်ပြီး ချွဲကျိနေတဲ့ မှန်တွေ၊ အိုးတွေ၊ ပန်းကန်ပြားတွေကို သန့်ရှင်းသွားအောင် အသုံးပြုပြီးသား လက်ဖက်ခြောက်အိတ်လေးတွေကို ရေနွေးနွေးနဲ့ ထပ်စိမ်ပြီး ထိုနှစ်ခါပြန် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးလို့ရပါတယ်… လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်လေးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်တမျိုးက အဆီတွေ အချွဲအကျိတွေကို ကူညီဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်…
အိမ်သန့်ရှင်းရေး… စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်း ကျန်းမာရေးတို့အတွက် အသုံးဝင်လှတဲ့… ဒီလက်ဖက်ခြောက်အိတ်လေးတွေကို လွှတ်မပစ်သေးခင် တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေလို့ အကြံပေးလျက်…
Posted by Yaminnie’s Daydream at 1:16 AM 1 comment: Links to this post
1) အသုံးပြုပြီးသား လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကို ရေနွေးနွေးလေးထဲမှာ ပြန်စိမ်ပြီး… မျက်လုံးပေါ်မှာ မိနစ် ၂၀လောက် အုံပေးထားလိုက်ရင် မျက်ကွင်းညိုခြင်း မျက်လုံးမို့နေခြင်းများ ကို သက်သာစေပါတယ်…
2) ထိုလက်ဖက်ခြောက်ဖတ်စိမ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ခေါင်းကို ပုံမှန်လျှော်ပေးမယ်ဆိုရင်… ကိုယ့်ရဲ့  ဆံပင်လေးက တောက်တောက်ပပလေး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်… (ဆံပင် အနက်ရောင် ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပဲနော်…)
3) မိန်းကလေးများအတွက် မျက်နှာမှာသုံးတဲ့ Tonner တွေဘာတွေ ကုန်သွားလို့… သွားလည်း မ၀ယ်ဖြစ်သေးဘူး… သုံးဖို့လည်းလိုနေတယ်ဆိုရင် အသုံးပြုပြီးသား လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကို မျက်နှာတ၀ိုက် tonner သုံးသလိုပဲ သုံးလိုက်ပါ… ပြီးနောက်မှာတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ တဘက်ကလေးနဲ့ မျက်နှာကို ခြောက်သွားအောင် ပြန်သုတ်လိုက်ပါ… လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်မှာပါတဲ့ ဓာတ်တမျိုးက မွေးညှင်းပေါက်တွေကို သေးငယ်သွားစေတဲ့အတွက် မျက်နှာအဆီပြန်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်…
4) လူတော်တော်များများက ခြေထောက်မှာ ချွေးထွက်များပြီး အနံ့ နံတတ်ပါတယ်… ချွေးထွက် နည်းစေဖို့အတွက် ခြေထောက်ရှိ မွေးညှင်းပေါက်လေးတွေ ကျဉ်းဖို့ လိုပါတယ်… အထက်မှာ ပြောထားသလို လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်မှာပါတဲ့ ဓာတ်တမျိုးက မွေးညှင်းပေါက်တွေကို သေးငယ်သွားစေတဲ့အတွက် နေ့တိုင်း လက်ဖက်ခြောက်ရေ ကျကျထဲမှာ ခြေထောက်ကို မိနစ်၂၀လောက် စိမ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ခြေနံ့ နံမှု လျော့နည်းပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
Posted by Yaminnie’s Daydream at 8:08 AM No comments: Links to this post
After like9years, I am back again to blogging.
ယမာရေးတဲ့ ကဗျာလေးတွေ (16)
Archives (Stories) (13)
Archives (Info Sharing) (11)
Archives (old lyrics) (5)
Archives (Short Stories) (4)
Archives (Thoughts) (4)